प्रचण्ड कसरी लम्पसारवादमा पतन भए ? — JanaPati-Nepali online news portal
प्रचण्ड कसरी लम्पसारवादमा पतन भए ?
यो भुल्नु हुदैन कि अव प्रचण्डको दर्दनाक अवशानलाई कसैले रोक्न सक्दैन् ।
कुनै बेला नेपाली क्रान्तिको नायकको रुपमा क्रान्तिकारी छवि बनाएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ वर्गीय र राष्ट्रिय आत्मसर्मपणवादमा पतन भएसँगै आज दुनियाँभरी प्रहशनको पात्र बन्न पुगेका छन् । र, आज उनको नयाँ चिनारी बन्न पुगेको छ –लम्पसारवादी ।
यो चिनारी उनको मात्र होइन, उनले नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द)्को पनि हो । त्यसैले यसलाई कतिपयले नेकपा लम्पसारवादी केन्द्र पनि भन्न थालेका छन् । सिंगो पार्टीको दिशा र त्यसको समग्र क्रियाकलापहरु नै लम्पसारवादबाट निदेर्शित हुनुले पनि उसलाई नयाँ चिनारी दिनुको सार्थकता पुष्टि हुन्छ । पुष्पकमल र उनको पार्टीको नयाँ चिनारी बोकेर यतिबेला निकै चर्चामा आएको लम्पसारवाद आखिर के हो त ? यो कुन कुन रुपमा अभिव्यक्त भएको छ । यसका सैद्धान्तिक र वैचारिक आधार के हुन् ? कस्तो छ यो समुह लम्पसारवादमा पतनको श्रृखला ? यहाँ यस सम्बन्धि छोटो चर्चा गरिने छ ।
गद्धारी र आत्मसमर्पणको अन्तिम अभिव्यक्ति लम्पसारवाद हो । राजनीतिक रुपमा वर्गीय र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद, वैचारिक रुपमा विचलनवाद, सांस्कृतिक रुपमा चाकडीवाद र दार्शनिक रुपमा भक्तिवादको केन्द्रकृत र अन्तिम अभिव्यक्तिको रुपमा लम्पसारवाद देखा पर्दछ । अर्काे अर्थमा भन्नुपर्दा आफ्ना सम्पूर्ण ध्यय, उद्देश्य, निष्ठा, आदर्श र मूल्यप्रतिको प्रतिवद्धतामाथि विश्वासघात र गद्धारी गर्दै दुश्मनको बफादार नोकरमा परिणत हुनु र आफ्नो सम्पूर्ण पहिचान दुश्मनको सेवामा समर्पित गर्नु लम्पसारवाद हो । त्यसकारण लम्पसारवादीहरुको स्वतन्त्र अस्तित्व हुदैन ।
त्यतिबेला विचार संश्लेषणको रुपमा प्रचण्डपथ निर्माण गरियो । यो निराधार रुपमा निर्माण गरिएको प्रचण्डपथलाई स्थापित गर्न भनेर प्रचण्डको हदैसम्मको देवत्वकरण गरियो । मार्गनिर्देशक सिद्धान्त माक्र्सवाद लेनिनवाद माओवादको पछाडि प्रचण्डपथ थपियो । र, विश्व क्रान्तिका महान गुरुहरुको समकक्षी हुने गरी प्रचण्डको फोटो सजाइयो । प्रचण्डपथको औचित्य र आधार पुष्टि गर्न लेखहरु प्रकाशन गर्ने, गराउने र लेखको प्रारम्भमा प्रचण्डको भनाइलाई राख्नु पर्ने चलन नै स्थापित गरियो । त्यति मात्र होइन, पार्टीमा को क्रान्तिकारी हो र को होइन भन्ने कुराको मापदण्ड नै प्रचण्डपथको भजनकिर्तनलाई बनाइयो ।
यो गलत अभ्यासले कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुमा हुनै पर्ने द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोण र आलोचनात्मक चेतलाई दुरुत्साहित ग¥यो भने नेतृत्वप्रतिको रामभरोसे बुझाइलाई प्रोत्साहित ग¥यो । यसले मालेमावाद सम्बन्धी आाधारभुत सैद्धान्तिक अध्ययन संस्कृतिको विकासमा समेत गतिरोध पैदा ग¥यो । जनयुद्धको योजना र दैनिन्दिनका संघर्षका कार्यक्रम सम्बन्धी प्रशिक्षण बाहेक सैद्धान्तिक अध्ययन अध्यापनको कडि नै टुट्यो । जसले गर्दा माओवादी आन्दोलनको बैचारिक साँस्कृतिक धरातल जनयद्धको तीव्र विकासको तुलनामा धेरै पछि प¥यो । यही कमजोर वैचारिक, सांस्कृतिक धरातलबाट नै प्रतिक्रान्ति जन्मियो ।
२०५५ मा सम्पन्न पार्टीको चौथो विस्तारित वैठकबाटै नेतृत्व केन्द्रीकरणको अभ्यास सुरु भयो र त्यसलाई सांगठनिक रुपले मात्र होइन, वैचारिक रुपले समेत प्राधिकारपूर्ण बनाउने काम दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत गरियो । यो गलत अभ्यासले जनवादी केन्द्रियतालाई लत्याउदै पार्टी र क्रान्तिको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने जिम्मा पार्टीको सुप्रिमोको रुपमा प्रचण्डको नियतिमा छोडिदियो । पार्टीको विधि, विधान र पद्धति भन्दा प्रचण्डको नियति निर्णायक बन्न पुग्यो । यसले प्रचण्डको चरम महत्वाकांक्षा र स्वेच्छाचारिता दुवै मौलाउने भौतिक परिवेश निर्माण गरिदियो ।
भित्रभित्रै वैचारिक रुपले विचलित र सांस्कृतिक रुपले स्खलित भइसक्दा पनि छट्टु प्रचण्डले आफूलाई क्रान्तिकारी आवरणमा प्रस्तुत गरिरहे । जब उनले आफ्नो चरित्र अनुकूलको राजनीतिक यात्रा तय गर्नको लागि सुरक्षित अवतरणको दिशा समातेर क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई “डाइभर्ट” गरे, त्यसपछि मात्र क्रान्तिकारीहरुले पार्टीभित्र नेतृत्व गलत दिशामा गएको अनुभूत गरे । र, दुई लाईन संघर्ष सुरु भयो । त्यतिखेर सम्म प्रचण्ड पार्टीको नियन्त्रण बाहिर गइसकेका थिए ।
यहाँसम्म आइपुग्दा पार्टीमा एकातिर प्रचण्डलाई अद्भुत चमत्कारकको रुपमा बुझ्ने र प्रचण्डले जे गरे पनि त्यो क्रान्ति नै हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान हावी भइसकेको थियो भने अर्काेतिर नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाउदा वित्तिकै राजनीतिक भविष्य खतरामा पर्ने भौतिक परिवेश निर्माण भइसकेको थियो । यो परिवेशले प्रचण्डलाई क्रान्तिकारी शब्दजालको आवरणमा दक्षिणपन्थी विसर्जनवादको यात्रा संस्थागत गर्न सहज बनाइदियो ।
क. किरण र क.गौरवहरु भारतीय जेलमा रहेको मौका छोपी प्रचण्डले यो काम सम्पन्न गरेका थिए । वास्तवमा इमान्दार, निष्ठावान र सिद्धान्तनिष्ठ क्रान्तिकारी तप्का वाहेक पार्टीको ठूलो हिस्सा वैचारिक सांस्कृतिक रुपले नितान्त खोक्रो भइसकेको थियो । किनकि कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी बन्नेतिर होइन, शासक बन्ने तिरको ध्यानध्याउन्नमा पार्टीलाई केन्द्रित गरियो । कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी बन्ने बनाउनेतिर होइन, सत्ता प्राप्तिको साधनको रुपमा मात्र कार्यकर्तालाई उपयोग गर्न जोड दिइयो । यसले भोग–विलासतर्फको चिन्तन संस्कृति हावी हुने र त्यसकै निमित्त प्रभावशाली नेताको चाकडी गर्ने होडवाजीको अवस्था सिर्जना ग¥यो । हिजो जनयुद्धको राप र तापले पार्टीभित्रको यो हदसम्मको विचलन र विकृति छोपिएको थियो । जनयुद्धको विसर्जनसंगै यो विचलन पार्टीको आधारभूत दिशा बन्न पुग्यो । यही विन्दुबाट माओवादी आन्दोलनले विघटनको दिशा समात्यो ।
आन्दोलनको विघटनसंगै माओवादी क्रान्तिकारीहरु र विचलनवादीहरुबीच सम्बन्धविच्छेद र धु्रविकरण प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । क्रान्तिकारीहरु पार्टी पुनर्गठन गर्दै अगाडि बढे भने विचलनवादीहरु संसदवादमा पतन हुदै दलाल तथा नोकरशाहीतन्त्रमा संसदीय उठापटकीको अभिन्न अङ्ग बन्न पुगे । प्रचण्डको यो विचलनको यात्रा अगाडि बढने क्रममा बर्गीय र राष्ट्रिय आत्मासमर्पणवादहुँदै अन्ततः लम्पसारवादमा टुंगिएको छ ।
यी सबै तथ्यबाट के पुष्टि हुन्छ भने प्रचण्ड समुहको लम्पसारवादमा पतनको मुल आधार वैचारिक विचलन नै हो । क्रान्तिकारी सिद्धान्तप्रतिको इमान, निष्ठा र अटुट विश्वासको अभाव, त्यो सिद्धान्तलाई आफ्नै जीवनशैलीमा सतत् अभ्यास गर्ने कष्टसाध्य ध्याउन्नको अभाव र पार्टीले लिएका कतिपय गलत नीतिहरुको अभ्यासको कूल योगको अनिबार्य परिणामको रुपमा यो बिचलन देखा परेको हो ।
दोस्रो, प्रचण्डले जनयुद्धको सुरक्षित अवतरणको गन्तव्य पुरानै संसदीय व्यवस्थालाई बनाएर सत्ताको रस्वादन त गरे, त्यसको निमित्त महान १० वर्षे जनयुद्धका सम्पूर्ण उपलब्धीहरु समेत ध्वस्त पारेर देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको विश्वास जित्ने भरमग्दुर प्रयास पनि गरे । त्यसो गर्ने क्रममा प्रचण्ड सामाज्यवादीहरुको उपयोगको एउटा निरिह पात्रको रुपमा परिणत हुँदै गए । सामाज्यावादले नेपालको माओवादी आन्दोलनलाई कमजोर पार्न प्रचण्डलाई उपयोग ग¥यो । तर प्रचण्डको द्वन्द्धकालिन मुद्दाहरुबाट उन्मुक्तिको अभिलाशा अधुरै रह्यो ।
प्रचण्डले भारत भ्रमणको क्रममा गरेको २५ बुँदे राष्ट्रघाति सहमति, भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जी नेपाल आउँदा देखाइएको चाकडीको लिला, फिजीकरण र सिक्किमीकरणको दिल्ली मिसनकै अभिन्न अङ्गका रुपमा मधेशमा नागरिकता वितरण टोली खटाउनु, संविधान संसोधनको नाममा भारतीय रुची अनुरुप अंगिकृत नागरिकलाई राज्यको उच्च ओहोदामा प्रवेशको बाटो खोल्ने, हिन्दी भाषालाई राष्ट्र भाषाको मान्यता दिने, मधेशमा स्थानीय निकाय थप गर्ने जस्ता कामको लागि मरिहत्ते गर्नु भारतीय शासकबर्गलाई रिझाउने प्रयत्नकै उपज हुन ।
निर्वाचनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के गर्छ ? यसबारे नेकपाका पीबीएमको पछिल्लो धारणा